Amathuluzi aku-inthanethi wokubeka isizinda esimhlophe esithombeni | Izindaba zamagajethi
Amathuluzi aku-inthanethi ukubeka isizinda esimhlophe esithombeni
UPaco L Gutierrez | | Isithombe
Ukuhlelwa kwezithombe kuyinto engatholwa yinoma ngubani onamaselula noma ikhompyutha futhi lokhu kusinikeza amathuba amaningi lapho usebenza nesithombe. Ukushintsha isizinda sibe mhlophe kucelwa kakhulu ngabantu, kepha hhayi wonke umuntu uyazi ngokuqinisekile ukuthi isiphi isihlungi noma iluphi uhlelo lokusebenza oluzosetshenziswa ukufeza lo mphumela. Izizinda ezimhlophe zinika izithombe ukubukeka okungaguquguquki futhi azinaziphazamiso.
Ngaphezu kwalokhu, esinye sezizathu kungaba ukuthi sifuna ukusebenzisa izithombe kahle ukuyisebenzisa kumadokhumenti asemthethweni, njenge-DNI yethu noma ilayisense yokushayela. Kuyinsakavukela ukusebenzisa lolu hlobo lwethuluzi lezithombe zephrofayili noma ama-avatar. Kulesi sihloko sizokhombisa izinketho ezinhle kakhulu zokushintsha isizinda sezithombe zethu sibe mhlophe ngezinyathelo ezilula.
1 Amathuluzi aku-inthanethi ukubeka isizinda esimhlophe
1.1 Susa i-BG
1.2 Ukususwa kwe-AI
2 Izicelo zokubeka isizinda esimhlophe kuselula
2.1 I-Adobe Photoshop
2.3 Isihleli seMicrosoft Eraser Blackground
Amathuluzi aku-inthanethi ukubeka isizinda esimhlophe
Uhlelo lokusebenza lwewebhu oluhambisana nezimo eziningi olunikeza umhleli okwazi ukubona abantu nezinto noma izilwane. Izosusa ngokuphelele isizinda esithombeni kumasekhondi ambalwa. Lolu hlelo lokusebenza lwewebhu lulula ukulusebenzisa njengokufaka iwebhusayithi yalo esemthethweni.
Yize ukusebenza kwayo online kuqondile kakhulu, sinesicelo sedeskithophu uma kunesidingo, kokubili kweWindows, MacOS noma iLinux. Lolu hlelo lokusebenza lwedeskithophu lusinikeza lula nomsebenzi wokusula isizinda seqembu lezithombe ngobuningi ngaso leso sikhathi.
Ingabuye ihlanganiswe namanye amathuluzi afana neZapier lapho sithola amanye ama-plugins ukuyihlanganisa namanye amapulatifomu. Uma sifuna okufana nevidiyo, unjiniyela ofanayo unethuluzi lokusula isizinda samavidiyo.
Elinye ithuluzi elithile lokusula izimali yi-Removal AI, okuyinto kwabaningi engenye yezinto ezinhle kakhulu kusukela lapho hhayi kuphela ukucabanga ngokususwa kwesizinda kepha futhi kungeza ukucutshungulwa kwangemva kobuhlakani bokufakelwa okunikeza isithombe ukungaguquguquki okungekho olunye uhlelo lokusebenza lwewebhu ekunikeza khona. Umphumela wokugcina ufana kakhulu nalokho esingakuthola ngesihleli sezithombe esizinikele, into okufanele siyazise uma sifuna ukusebenzisa ukuthwebula izithombe ngokungathi sína.
Ngamafuphi, uma ufuna okuthile ngokushesha nge-Susa BG sinokwanele, kepha uma ufuna imiphumela "emihle" ethe xaxa, i-Removal AI ilungile.
Izicelo zokubeka isizinda esimhlophe kuselula
Uma sifuna abahleli bezithombe, sizothola eziningi lapho sinalo leli thuluzi, kepha azikho kangako lokho kwenze kube lula ngathi ukuzisebenzisa ngokushesha. Lapha sizocacisa ngokuningiliziwe okungu-3 okuhle kakhulu nokulula okukhona kuselula yethu.
Elinye lamathuluzi athandwa kakhulu wokuhlela izithombe ngokungangabazeki i-Adobe Photoshop, elungele ukuhlelwa kwamakhompyutha kanye ne-smartphone. Kulula ukuthi igama likhale insimbi ngoba ngaphezu kokuhlelwa kwezithombe inezinye izinhlelo zokusebenza. Ngaphezu kokubeka isizinda esimhlophe ezithombeni, sinezinketho ezinjengokunqampuna izithombe, ukusebenzisa izihlungi, ukwenza imiklamo yomuntu siqu noma ukwenza ama-watermark.
Sinezinguqulo ezahlukahlukene zalolu hlelo lokusebenza, phakathi kwazo esithola inguqulo ye-Windows, inguqulo ye-macOS engaphansi kokubhaliselwe kanye nezinhlelo zokusebenza zamatheminali eselula zombili nge Android njengoba iOS. Uma ufuna uhlelo oluxubekayo, ngaphandle kokuba nethuluzi elisinikeza lo msebenzi, kusisiza futhi ukuba senze uhlelo olulula lwezithombe zethu, ngaphandle kokungabaza lokhu kuyindlela engcono kakhulu.
I-Adobe Photoshop Express: izithombe namakholaji
Lolu hlelo lokusebenza lunikezelwa kuphela kulo msebenzi othile, ngokungangabazeki okukhonjiswe kakhulu uma inhloso kuphela ukuthi, noma kunjalo ayinazo zonke izinketho zokuhlela eziphambili i-Adobe enazo. Ikuvumela ukuthi ususe izimali ngokuzenzakalela ngobuhlakani bokufakelwa bohlelo uqobo. Ngaphezu kwalokho, uhlelo lokusebenza lusinikeza ngemibala egqamile ngaphezu kwemiklamo emhlophe noma ebabazekayo.
Uhlelo lokusebenza lusinikeza inqwaba yezifanekiso, kepha singasebenzisa futhi nezithombe zethu ukushintsha ingemuva bese ngaleyo ndlela senze okuthathiwe okuhlukile. Uhlelo lokusebenza luyatholakala kokubili i-Android ne-iOS, Ukusebenza kwayo kulula kakhulu. Lokhu kusisiza futhi ukuthi sakhe i-PNG ngemifanekiso futhi siyisebenzisele ukuhlela isithombe. Singabona izinhlobo nezidingo zayo ezihlukile kufayela layo le- iwebhusayithi esemthethweni.
Isihleli seMicrosoft Eraser Blackground
Olunye uhlelo lokusebenza olukhulu olunikezelwe kuphela ekwakhiweni kwesicelo se-PNG nezizinda zezithombe zethu ezilungele abasebenzisi be-iPhone. Kubhekwa ngabasebenzisi bayo uhlelo oluhle kakhulu futhi oluhlelekile lokuhlela. Uhlelo lokusebenza kulula kakhulu ukulusebenzisa kunoma iyiphi i-terminal ebhlokhi ngaphandle kokubambezela noma ukwehluleka.
Uhlelo lokusebenza lusikhomba ukuze sikwazi ukuhlela izithombe zethu kalula, Singasebenzisa izizinda ezisobala ukwakha i-PNG, izizinda ezimhlophe noma izizinda ezivela kugalari yethu. Kusinika nenkululeko yokuhlela siphinde sithinte izithombe ngendlela esithanda ngayo, sinezela izihlungi noma sithinte umbala wazo kabusha. Kumele silande uhlelo lokusebenza ku-AppStore futhi ukujabulele ngokuphelele mahhala.
Indlela ephelele ye-athikili: Izindaba zamagajethi » Isithombe nomsindo » Isithombe » Amathuluzi aku-inthanethi ukubeka isizinda esimhlophe esithombeni
Imidlalo yokudubula engcono kakhulu ye-PC